Mads Mikkelsen wuxuu ka hadlayaa Beddelka Johnny Depp ee Xayawaanka Fantastic 3 - Dhaqanka Pop
Mads Mikkelsen wuxuu ka qoomameynayaa inuusan la hadlin Johnny Depp kahor inta uusan ku beddelin bahallada cajiibka ah 3
Sawirka Marilla Sicilia/Getty Images
Xayawaanka cajiibka ah 3 Xiddiga Mads Mikkelsen ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu kala hadlo Johnny Depp beddelka filimka.
Bishii Nofembar ee la soo dhaafay, Depp wuxuu ka baxay taxanaha filimka ka dib markii laga badiyay kiiskiisii ​​been abuurka ahaa Cadceed , tabloid Ingiriis ah oo ku tilmaamtay inuu yahay xaasle garaacaya sheeko tixraacaysa eedeymo ah inuu ku xadgudbay xaaskiisii ​​hore Amber Heard.
sida loo jabiyo qof taleefankiisa 2020
Wareysi dhowaan lala yeeshay Sunday Times , Mikkelsen, oo sanadkii hore loo shaqaaleysiiyay inuu qaato doorka saaxirka mugdiga ah Gellert Grindelwald ee Harry Potter spin-off, ayaa ka hadlay dabeecadda qumman ee qaadashada doorka loogu talagalay Depp.
tuulada shar vampire magaca marwada
Waxaan ula jeedaa, sida iska cad, waxay doonayeen inay filim sameeyaan, sida iska cadna mar dambe kuma lug yeelan, Mikkelsenexplained.Laakiin anigu kuma haysan eey dagaalkaas. Aniguna ma garanayo waxa dhacay [noloshiisa gaarka ah], mana aqaan haddii ay caddaalad ahayd, inuu shaqada waayay, laakiin waxaan ogahay uun in bandhiggu socdo, oo waxaan jeclaan lahaa inaan kala hadlo arrintaas haddii Waxaan haystay fursad, laakiin ma aqaan isaga oo keliya dareenkaas.
Laakiin way i soo waceen oo si cad ayay u degdegeen, aniguna waan jeclaaday qoraalka oo sidaas ayaan ku idhi haa. Waana ogahay inay dad badan muran ka taagnayd, laakiin taasi waa sida ay mar uun u ciyaarto, ayuu raaciyay.
Bishii May, ayuu Mikkelsen u sheegay Collider uma jeedo inuu ku dayanayo sawirka Depps ee dabeecadda.
Nobodys oo danaynaya inaan halkaas tago oo isku dayo inaan wax ka guuriyo, taasi waxay noqon doontaa is -dilid hal abuur leh isla markiiba, gaar ahaan markii hore loo sameeyay oo si xariifnimo leh, ayuu yidhi. Marka qof walba oo naga filaya inaan helno waddo kale. Markaan idhi, waxaan u baahanahay buundo u dhaxaysa wixii uu sameeyay iyo waxa aan qaban doono, sidaa darteed buundooyinkaas waa inaad wada heshaan, ha ahaato muuqaal gaar ah, haddii ay tahay dabeecad gaar ah xaaladaha qaarkood, laakiin waa inaad adigu iska dhigtaa . Wax kasta oo kale ayaa si cad u ahaan lahaa hal -abuur nacasnimo ah.
Waxa haga David Yates oo uu qoray J.K. Rowling iyo Steve Kloves, Xayawaanka cajiibka ah 3 xiddigaha Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Mads Mikkelsen, iyo Jude Law. Filimku wuxuu imanayaa tiyaatarada July 15, 2022.
amber rose iyo kanye west relationship
kareemka ugu fiican ee jiiska loogu talagalay keega maro jilicsan
xiddigta lulataaye waxay galmo la sameysaa taageere
sida loo sameeyo isku darka cake aad u qoyan